မာသာ ထရီဆာ - ဝီကီပီးဒီးယား
မာသာ ထရီဆာ (Saint Teresa of Calcutta ကာလကတ္တားမြို့မှ စိန့်ထရီဆာ) (၂၆ ဩဂုတ် ၁၉၁၀ - ၅ စက်တင်ဘာ ၁၉၉၇) ၏ မူရင်းအမည်မှာ အဂ္ဂနက်စ် ဂွန်ရှာ ဘိုဂျာရှား(Agnes Gonxha Bojaxhiu) ဖြစ်သည်။ အယ်ဘေးနီးယားလူမျိုး တစ်ဦးဖြစ်ပြီး  ယခင်ယူဂိုးဆလာဗီးယားနိုင်ငံ၊ စကောပီယေမြို့တွင် ၁၉၁၀ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ၊ ၂၆ရက်နေ့က ဖွားမြင်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် သီလရှင် တစ်ပါးဖြစ်သည်။ အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်တွင် ဘာသာရေးဟောပြောပွဲများ တက်ရောက်ခဲ့ရာမှ ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ အပြီးအပိုင်ဝင်ရောက်ကာ သာဿနာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများတွင် ဇောက်ချထမ်းဆောင်တော့သည်။ ၁၉၂၈ခုနှစ်တွင် Sister of Our Lady of Loretor သီလရှင်အသင်းသို့ ဝင်ရောက်သည်။ ၁၉၂၉တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဒပ်ဗလင်မြို့အနီးရှိ ခရစ်ယာန်ကျောင်းတိုက် တစ်ခုတွင် ဘာသာရေးသင်တန်းများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် သီလရှင်အဖြစ် ခံယူကာ ကိုလ်ကတ္တားမြို့ရှိ စိန့်မေရီ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ၁၇နှစ်တိုင်တိုင် စာပေသင်ကြားပို့ချခဲ့သည်။
အပြာစင်းနှင့် အဖြူရောင်ခေါင်းပေါင်း ဝတ်ဆင်ထားသော မာသာ ထရီဆာ
(1910-08-26)ဩဂုတ် ၂၆၊ ၁၉၁၀
Üsküb၊ အော့တမန် အင်ပိုင်ယာ (ယခု Skopje၊ မြောက်မက်စီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ)
စက်တင်ဘာ ၅၊ ၁၉၉၇(1997-09-05) (အသက် ၈၇)
သူမသည် ၁၉၅၀ တွင် ကာလကတ္တားမြို့၌ သာသနာပြုအသင်းကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ ၄၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်း မိဘမဲ့ကလေးများ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ နာမကျန်းသူများအား ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခဲ့သလို သာသနပြုအသင်း တိုးချဲ့နိုင်ရေးအတွက် ဦးစီးဦးဆောင်ပြုခဲ့သည်။ သူမကွယ်လွန်ပြီးနောက် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန်ပေါ ဒုတိယ က Blessed Teresa of Calcutta (ကောင်းချီးပေးခံရသူ ကာလကတ္တားမှ ထရီဆာ) ဘွဲ့ကို အပ်နှင်းခဲ့သည်။ အိန္ဒိယအစိုးရက မာသာထရီစာ၏ အသုဘအခမ်းအနားအား နိုင်ငံတော် ဈာပနာအဆင့်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပြီး နိုင်ငံများစွာတို့မှ အကြီးအကဲများလာရောက်ခဲ့ကြပြီး ဝမ်းနည်းကြောင်း ဖော်ထုတ်ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များတွင် Malcolm Muggeridge ရေးသားသည့် Something Beautiful for God စာအုပ်ကြောင့် မာသာ ထရီဆာသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူနှင့် အကူအညီလိုအပ်သူများအား လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရန် ဆော်ဩသူ အဖြစ် နိုင်ငံတကာတွင် အမည်ကျော်ကြားလာသည်။ သူမ၏ ပရဟိတ လုပ်ငန်းများကြောင့် ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၆၂ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ပက်ဒမာရှာရီ ဆု ကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒယနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံး ဂုဏ်ထူးဆောင် ဘာရတ် ရတနာ(Bharat Ratna) ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။
↑ "Blessed Mother Teresa". (2007). Encyclopædia Britannica. Retrieved4July 2010.
↑ Spink, Kathryn (1997). Mother Teresa: A Complete Authorized Biography. New York. HarperCollins, pp.16. ISBN 0-06-250825-3.
↑ Mother Teresa of Calcutta (1910–1997)။ Vatican.va။ 2010-08-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mother Teresa | Humanitarian။ Lucidcafe.com။ 24 July 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-08-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Associate Press. (14 October 2003). "Full house for Mother Teresa ceremony". CNN. Retrieved 30 May 2007.
↑ "Blessed Mother Teresa". (2007). Encyclopædia Britannica. Retrieved 30 May 2007.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မာသာ_ထရီဆာ&oldid=624184" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၁:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၁:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။